SSLPatch (Cydia) | आईओएस .7.0.6.०.। अपडेट नगरी सुरक्षा त्रुटि ठीक गर्नुहोस् आईफोन समाचार
SSLPatch (Cydia) को साथ आईओएस .7.0.6.०. to अपडेट बिना सुरक्षा त्रुटि
यदि यस विन्दुमा तपाईंले आईओएस .7.0.6.०.। मा अद्यावधिक गर्नु भएको छैन भने कि त यो नगर्नुको नतिजा थाहा छैन, वा तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण उपकरणको कन्फिगर गर्नु भएको छ र तपाईले स्थापना गर्नु भएको सबै सिडिया ट्वीकहरू स्थापना गर्नु भएको छ। यदि यो तपाईंको मामला हो भने, त्यसोभए यस लेखमा ध्यान दिनुहोस्, किनकि हामी तपाईंलाई एउटा उत्तम समाधान दिन गइरहेका छौं। प्रख्यात विकासकर्ता रायन पेट्रिचले एउटा प्याच बनाएको छ जसले गम्भीर सुरक्षा त्रुटिलाई ठीक गर्दछ iOS सँग संस्करण .7.0.6.०..XNUMX अपडेट गर्न आवश्यक पर्दैन जुन एप्पलले केहि दिन अगाडि प्रकाशित गर्यो। SSLPatch यस प्याचको नाम हो, र यो पहिले नै Cydia मा उपलब्ध भएको छ यो तपाईंको उपकरणमा स्थापना गर्न सक्षम हुन।
तपाईंको जेलब्रोकन आईफोन र आईप्याडमा प्याच स्थापना गर्न, तपाईंले पहिले रायन पेट्रिकको भण्डार थप्नु पर्छ। यो गर्नका लागि, सिडिया खोल्नुहोस्, "प्रबन्ध गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस् र "स्रोतहरू" मेनूमा पहुँच गर्नुहोस्। त्यसपछि माथिको दायाँ कुनामा "सम्पादन" बटन क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि माथिको बाँया कुनामा "थप्नुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहोस्। देखा पर्ने विन्डोमा तपाईंले निम्न ठेगाना लेख्नुपर्दछ: http://rpetri.ch/repo। एकचोटि भण्डार थपियो र यसको डाटा लोड भयो, SSLPatch प्याकेज Cydia मा देखा पर्नेछ। यसलाई तपाइँको उपकरणमा स्थापना गर्नुहोस् र तपाइँ सक्नुभयो। खैर, हामीले ती बिर्सनु हुँदैन जो आईओएस on मा अझै छन्: यो प्याचले उनीहरूका लागि पनि काम गर्दछ।
र किन मलाई त्यो प्याच विश्वास गर्न छ? रायन पेट्रिक एक प्रसिद्ध साइडिया विकासकर्ता हो, उहाँ एक नयाँ आगमनकर्ता हुनुहुन्न, र त्यसैले उहाँ पर्याप्त भरपर्दो हुनुहुन्छ। निश्चित रूपमा तपाईले उनलाई चिट्ठीहरू केहि थाहा पाउनुभयो, जस्तै एक्टिभेटर वा डिस्प्ले रेकर्डर, जुन तपाईले आफ्नो आईफोनमा स्थापित गर्नु भएको हुन सक्छ। जे भए पनि, यदि कसैले मेरो सिफारिश जान्न चाहन्छ भने, नयाँ संस्करण update.०.। मा अपडेट गर्नु उत्तम हुन्छ, जसले धिक्कार्न सुरक्षा त्रुटिलाई ठीक गर्दछ, र त्यसपछि जेलब्रेकको साथ इवासी ०.०..0, जुन पहिले नै उपलब्ध छ र आईओएसको संस्करणको साथ पूर्ण रूपमा काम गर्दछ। यदि तपाईंसँग धेरै ट्वीक्स स्थापना गरिएको छ र तपाईं एउटा अनुप्रयोग चाहनुहुन्छ जुन ती ट्वीकहरू, भण्डारहरू र तपाईंको लागि अन्य कन्फिगरेसन फाइलहरू बचत गर्दछ, PKGBackup ले त्यस्तै गर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » जेल » Cydia » SSLPatch (Cydia) को साथ आईओएस .7.0.6.०. to अपडेट बिना सुरक्षा त्रुटि
शुभ दिउँसो, म जान्न चाहन्छु कि यदि निम्न त्रुटि कसैलाई देखापर्‍यो भने, मेरो आईप्युन आईट्यून्सबाट संस्करण .7.0.6.०. to लाई स्क्र्याचबाट पुनःस्थापना गर्न अपडेट गर्नुहोस्, तर आईट्यून्सले मेरो आईप्याड पत्ता लगाउँदैन यसले मलाई निम्न कुरा बताउँछ »आईट्यून्ससँग सम्पर्क हुन सकेन। आईप्याड किनभने एक अवैध प्रतिक्रिया उपकरण बाट प्राप्त भएको थियो, यदि म यो एक विन्डोज कम्प्युटरबाट जडान गर्दछ केहि पनि हुँदैन तर म्याक प्रयोग गर्दछु, मैले पहिले नै ITunes अनस्टल गरें र यसलाई पुन: स्थापना गरें र यो उही रह्यो, यदि तपाईंसँग कुनै समाधान छ भने, धन्यवाद।
CristianArce लाई जवाफ दिनुहोस्
स्पष्ट रूपमा म मात्र एक हुँईन ... मैले आफ्नो आईफोन s हरूलाई अहिले सम्म 7.0.6.०..4 मा अपडेट गरेको छैन - तर आईट्यून्सले मेरो उपकरणलाई चिन्न सक्दैन जब म यसलाई पीसीमा जडान गर्छु ... कसैले मलाई के हुन सक्छ बताउन सक्छ।
कुन सुरक्षा त्रुटि? मैले उसको बारेमा पढेको थिइनँ
के यो प्याचले SSL समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्दछ? यदि यो समाधान गरियो भने, किन अपडेट गर्ने?
US GB 9.99 PKGBackup को लागि? मैले सिडियामा कहिल्यै यस्तो गार्सो विकासकर्ता देखेको छैन, म ओपनब्याकअपलाई सोध्छु कि यसले उही काम गर्‍यो तर नि: शुल्कका लागि यसले अब काम गर्दैन?
किनभने कसैले पनि जवाफ दिएन म आफैं जवाफ दिनेछु, हिजो आईओएस updated.०. updated मा अपडेट भयो मैले पहिले ओपनब्याकअप स्थापना गरें र मैले सम्बन्धित ब्याकअप गरें, जेलब्रेक गरिसकेपछि मैले सिडियाबाट डाउनलोड गरेको पहिलो कुरा भनेको ओपनब्याक अप र पुन: स्थापना थियो, सत्य यो हो। यसले राम्रोसँग काम गर्‍यो प्राय: केवल एक मात्र कुरा भनेको धेरै आईकनहरू "उल्टाइएको थियो" र एक्टिभेटर कन्फिगरेसन पारित गरिएन तर बाँकीका लागि मैले सबै स्रोतहरू, ट्वीकहरू, सिडिया अनुप्रयोगहरू, यहाँसम्म कि रोमहरू पनि प्रतिलिपि गरें। सिधा गए, मलाई लाग्छ के गलत भयो बैकअप हुनु भन्दा पहिले सेटिंग्स लागू गर्नुहोस् बटन दिइरहेको थिएन, म यसलाई कसरी जान्छु भनेर हेर्न आईप्याड मार्फत फेरि प्रयास गर्नेछु।
मँ स्पष्ट गर्दछु कि GBA4iOS सफारी मार्फत यसको स्थापना विधिमा गएको थिएन, तर १--फेब्रुअरी १ ​​19 भन्दा अघि मिति फिर्ता गर्नु र सम्बन्धित पृष्ठमा स्थापना गर्न यसलाई फिर्ता जानु भन्दा सजिलो केहि छैन र त्यहाँ उत्तम छ, रोमहरू त्यहाँ थिए।
iTweaks, यद्यपि यो स्थापना भएको थियो भने, मैले यो पुन: स्थापना गर्नु पर्‍यो किनभने यसले काम गरेन, किनकि मलाई यस्तो लाग्दैन कि कसरी मलाई त्यस समयमा एक शृring्खलन गर्ने कि किनभने मलाई लाग्छ कि त्यो समाधान हुने थियो।
एररटा: आईट्विक्सको सट्टा आईविजेट्स पढ्नुहोस्
ビ ビ भन्यो
धेरै धन्यवाद! सधैँ जस्तो तपाईका लेखहरूले मलाई ठूलो समस्याबाट बचाउँछ
चमकदार यसलाई जारी राख्नुहोस्। फेरि पनि धन्यबाद
ハ ビ लाई जवाफ दिनुहोस्
अपडेट .7.0.6.०. and र .6.1.6.१.। ले पनि GBA4iOS इमुलेटरको स्थापना रोक्दछ
तपाईंलाई थाहा छ के राम्रो हुन्छ? यो अझै पनि निकै दर्दनाक वा हिंस्रक छ तर मलाई लाग्छ कि यो राम्रो छ यदि तपाईं मध्ये कुनै एक - वेब को सम्पादक वा पाठकहरू - आईओएस .7.0.6.०. installed स्थापना गरेको छ, हामीलाई बताउनुहोस् कि यदि तपाईंले ब्याट्री प्रदर्शनमा उल्लेखनीय भिन्नताहरू अवलोकन गर्नु भएको छ भने। एक फोरम वा ट्विटर मा लगभग सबै पढेको छ तर विशेष वेबसाइटमा केहि पनि छैन।
सुरक्षा विवरणले मलाई धेरै चिन्तित गरेन (र यो ट्वीक कमसँग) तर प्रदर्शन हो। मलाई डर छ कि यो अपडेट एप्पलले सिर्जना गर्नेछ (यो उनीहरूको लागि ठूलो गल्ती हुनेछ) तब हामीलाई "cing जबरजस्ती" आईओएस .7.1.१ मा अपडेट गर्नको उद्देश्यका साथ। र, JB लाई अलविदा।
तपाईको समयको लागि धन्यवाद।
अलेक्जान्ड्रेलाई जवाफ दिनुहोस्।
यसले गेब ios आईओएस वेब मार्फत इमुलेटरको स्थापनालाई रोक्दैन, यो मँ अधिक आईओएस .4.०7.06 आईफोन s एस मा छु र मैले यसलाई जेबी बिना नै स्थापना गरेको छु र gs.१. in मा जेबीको साथ gs जीएसमा पनि स्थापित गरें यति निर्धक्क छ भने तपाईले स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ यो तपाईं मात्र मिति १ February फेब्रुअरी २०१5मा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ र यो ठीक छ
Leiwss लाई जवाफ दिनुहोस्
केन्ट लियोन भन्यो
नमस्ते कसैले मलाई मद्दत गर्दछ म ipasi i आईओएस .4.०7.06 म ivasi0n को साथ यसलाई जेल तोड्न चाहन्छु तर जब rpocess समाप्त हुन्छ मसँग केवल evasi0n आइकन हुन्छ र कुनै सिडिया देखा पर्दैन म यसलाई ट्याप गर्छु र evasi0n स्क्रिन खाली रहन्छ र यो बाहिर आउँछ र उही रहन्छ। Cydia आइकन र केहि बिना
क्यान्ट लियोनलाई जवाफ दिनुहोस्
सबै जसलाई समस्या छ जब इवासी ० एनको साथ जेलब्रेक: उपकरण पुन: भण्डारण गर्नुहोस्, ब्याकअप पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् र त्यसपछि इवासी ० एनको साथ जेलब्रेक गर्नुहोस्।
मलाई लाग्छ कि पोष्टले पनि SSL के हो वर्णन गर्दछ, र यसको कार्य के हो। नेटवर्कमा अब यो अनुमान गरिएको छ कि यो असफलता आईओएस bet बिटादेखि अस्तित्वमा थियो, एप्पल NASA सँगको बैठकबाट केहि। जे भए पनि, जसरी कोहीले आईओएस .6.०..7.0.6 मा ब्याट्री अनुभवहरू बारे साझेदारी गर्न चाहँदैन, मैले मेरो आईफोन and र आईप्याड update लाई अपडेट गर्ने निर्णय गरें। जुन बेला मलाई यो सामान्य लाग्छ, म तपाईंलाई ब्याट्री प्रदर्शनको बारेमा केहि बताउनेछु।
यो यहाँ वर्णन गरिएको छ https://www.actualidadiphone.com/2014/02/23/la-importancia-de-actualizar-ios-7-0-6-y-ios-6-1-6/
हे, एक प्रश्न। म यो मेरो आईपड g जी को लागी खोज्दै छु तर र्याप्ट्रिच रेपोले फेला पार्न सकेन। के तपाइँलाई थाहा छ मेरो उपकरण मिल्दो छ वा तिमीलाई थाहा छ म कहाँ पाउन सक्छु?
आईओएस .7.0.6.०..6.1.4 को ब्याट्री मुद्दामा, मैले अवधिमा सुधार देखेको छु, यो यो आईओएस when.१..5 मा भएको जस्तो छ। मैले अद्यावधिक जोखिममा राखेको छु र सत्य यो हो कि मलाई यसको पछुतो छैन र सबैभन्दा उत्तम यो SSL र जेलब्रेक विफलतालाई हल गर्दछ! मसँग आईफोन5छ, 29h २ m मिटर सुत्नुहोस्, h एच २ m मी प्रयोग गर्नुहोस्, बाँकी ब्याट्री: %२%, केवल वाइफाइको साथ प्रयोग गरिएको छ, मैले यसलाई on जीमा परीक्षण गरेको छैन। मैले कुनै पनि ब्याकअप (ब्याट्री जीवनको डर) लोड नगरीकन र3वटा चिमटा बिना नै पुनःस्थापना गरें। आईओएस .29.०..72 मा अद्यावधिक गर्न हिम्मत नगर्ने मानिसहरूलाई ब्याट्री समस्याको कारण, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाई अपडेट गर्नुहोस् र ब्याकअपको साथ पुनःस्थापना नगर्नुहोस्। म आशा गर्छु कि यसले तपाईलाई सहयोग पुर्‍याउँछ। शुभकामना।
सबैलाई नमस्कार, म तपाईलाई केहि सोध्न चाहन्छु। मसँग4जीबी ss छ भर्खरै अपडेट गरिएको आईओएस .3.०.। को साथ। कुरा कि अब CLaro अर्जेन्टिना को नेटवर्क मलाई अब लिदैन। मसँग यो अद्यावधिक गर्नु भन्दा पहिले यो मेरो लागि काम गर्ने क्षमतासहितको छ। के तपाइँसँग केहि आईडिया छ के म गर्न सक्छु? पहिलेदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद
अर्को क्वेरी किनभने IMEI द्वारा मुक्ति विकल्पमा अर्जेन्टिना देखा पर्दैन ???? व्यक्तिगत SA को लागि ??? मेरो फोन स्प्रिन्टको हो
नमस्कार, के कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छ ... मैले 7.0.6.०. installed स्थापना गरें र मैले धेरै अनुप्रयोगहरू गुमाएँ र म कलहरू गर्न सक्दिन। कसैले मलाई कसरी यसलाई ठीक गर्ने भनेर बताउन सक्छ, कृपया, यो अति जरुरी छ !! धन्यबाद
विद्यालाई जवाफ दिनुहोस्
गुडबर्बर: एक वेबसाइट जसले तपाइँलाई आईओएसको लागि अनुप्रयोग बनाउन प्रोग्रामिंग ज्ञानको आवश्यकता बिना नै अनुमति दिन्छ
रकेटलेन्चर: लक स्क्रीनबाट तपाईंको मनपर्ने अनुप्रयोग सुरूवात गर्नुहोस्